2014 July & August Donation Plan « One Dollar Fund – Myanmar (ODF Myanmar)
2014 July & August Donation Plan
Let us announce that we have chosen “Thukhitar Yarma” nunnery which is located at Kan Bae Station Street, Yan Kin Township, Yangon as the venue for 2014 July & August donation (46th donation) of ODF Myanmar. The orphanage is the place where orphaned nuns from different ethnics from various parts of Myanmar are being looked after.
Currently, there are about 100 nuns whose ages ranging from kindergarten level to secondary level and they are studying at the monastic education center located at Kan Bae Station Street. During rainy season, the flood from byanearby stream makes water come into the nunnery building and therefore nuns are experiencing the problem of spaces to sleep.
ODF Myanmar made contributions to that nunnery back in July, 2012. Since onlyahandful of donors visit the nunnery though the place is situated within reachable area from downtown Yangon and the place is in need of assistance, ODF Myanmar is planning to help the nuns from the school for the second time.
Therefore, we would like to announce that ODF Myanmar will contribute donations for Shan, Pa Long and Pa O nuns from Thukhitar Yarma nunnery as our 46th donation plan and donations will be accepted till 31-August-2014. Donations can be made through official ODF volunteers (http://odfmyanmar.org/volunteers) or to ODF Bank Accounts (Singapore & Myanmar). For detailed information, please visit our website http://odfmyanmar.org/donate/. Many thanks to our donors and friends!
ODF Myanmar ၏ ၂၀၁၄ ဇူလိုင်နှင့်ဩဂုတ်လ အလှူ (၄၆ ကြိမ်မြောက် လစဉ်အလှူ)အဖြစ် ရန်ကုန်မြို့၊ ရန်ကင်းမြို့နယ်၊ ကံဘဲ့ဘူတာရုံလမ်းရှိ သုခိတာရာမ သီလရှင်စာသင်တိုက်အား လှူဒါန်းရန် ရွေးချယ်ထားပါသည်။ အဆိုပါ သီလရှင်စာသင်တိုက်တွင် တောင်တန်းဒေသအသီးသီးမှ တိုင်းရင်းသားသီလရှင် မိဘမဲ့ကလေးများအား ပြုစုစောင့်ရှောက်ပေးလျက် ရှိပါသည်။
ယခုအခါ ကျောင်းတွင် မူကြိုအရွယ်မှစ၍ အလယ်တန်းအရွယ်အထိ သီလရှင်ပေါင်း (၁၀၀)ပါးခန့်နေထိုင်လျက်ရှိပြီး သီလရှင်လေးများမှာ ကံဘဲ့ဘူတာရုံလမ်းရှိ ဘုန်းတော်ကြီးသင်ပညာရေးကျောင်းတွင် ပညာဆည်းပူးလျက် ရှိပါသည်။ ယခုကဲ့သို့ မိုးရာသီတွင် ကျောင်းတည်ရှိရာ အနောက်ဘက်မှ ချောင်းရေလျှံမှုကြောင့် ကျောင်းအတွင်းသို့ရေဝင်ကာ သီလရှင်ကလေးများမှာ အိပ်စက်ရန်နေရာအခက်အခဲ ကြုံတွေ့ နေရပါသည်။
ODF Myanmar အနေဖြင့် အဆိုပါကျောင်းအား ၂၀၀၂-ဇူလိုင်လတွင် တစ်ကြိမ်လှူဒါန်းခဲ့ဖူးပြီး ဖြစ်ပါသည်။ မြို့ နှင့် အလှမ်းမဝေးသော်လည်း အလှူရှင်များ အရောက်အပေါက်နည်းသော၊ အကူအညီလိုအပ်နေသော နေရာဖြစ်သောကြောင့် ODF Myanmar အနေဖြင့် အဆိုပါကျောင်းမှ သီလရှင်ကလေးများအား ထပ်မံကူညီနိုင်ရန် စီစဉ်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။
ထို့ ကြောင့် သုခိတာရာမ သီလရှင်စာသင်တိုက်ရှိ ရှမ်း၊ ပလောင်၊ ပအို့ဝ်နှင့် တိုင်းရင်းသား မိဘမဲ့သီလရှင်ကလေးများအတွက် ODF Myanmar အလှူရှင်များမှ တတ်အားသရွေ့ ပံ့ပိုးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်းနှင့် အလှူငွေများကို ၂၀၁၄ ဩဂုတ်လ ၃၁ ရက်နေ့ နောက်ဆုံးထား၍ ကောက်ခံသွားမည့်အကြောင်းကိုလည်း အသိပေးအပ်ပါသည်။ အလှူငွေများကို ODF volunteer များထံသို့ ဆက်သွယ်၍လည်းကောင်း၊ ODF ဘဏ်စာရင်းများသို့ လည်းကောင်း လှူဒါန်းနိုင်ပါသည်။ အသေးစိတ် အချက်အလက်များကို http://odfmyanmar.org/donate/ တွင် ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။ အလှူရှင်များအားလုံးနှင့်တကွ မိတ်ဆွေသင်္ဂဟများအားလုံးအား ကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါသည်။